Kidnapping – Midi Madagasikara
Imamba : Fiara nentina nanao kidnapping hitan’ny polisy
Redaction Midi Madagasikara 5 avril 2014 Fiara, Imamba, Jiolahy, Kidnapping, polisy, R 21
Naharay vaovao ny polisy avy misahana ny heloka be vava fa misy fiara iray R 21 teny amin’ny manodidina an’Imamba. Rehefa nandeha ny fanadihadiana dia tombanana fa nampiasaina tamin’ny fakana an-keriny karàna ity fiara ity ary rehefa vita izay nilana azy dia napetraka teny amin’io toerana io. Mitohy hatrany araka izany ny famotorana ataon’ireo misahana…
Kidnapping : Navotsotra ilay karàna
Redaction Midi Madagasikara 3 avril 2014 Ivandry, Jiolahy, Karana, Kidnapping
Ny alin’ny talata teo no navotsotr’ireo mpaka an-keriny ilay karàna nisy naka an-keriny tetsy Ivandry. Tsy mbola fantatra ny vola nalain’izy ireo satria tsy nisy fitoriana nipetraka teny amin’ny mpitandro ny filaminana. Notazomin’ny fianakaviana ho tsiambaratelo ho azy ireo izany ny momba iny fakàna an-keriny iny, toe-javatra izay mahazatra ihany. Ny antony dia rahonan’ny jiolahy…
Antanimora : Mpanao “kidnapping” telolahy maty voatifitry ny zandary
Redaction Midi Madagasikara 25 novembre 2013 Antanimora, Kidnapping, maty voatifitry
Efa narahan’ny zandary hatrany Tsaralalàna ireto olon-dratsy ireto. Raikitra ny fifampitifirana tetsy Antanimora, amin’ny làlana miakatra ho any Ambohitrakely iny ny harivan’ny asabotsy teo. Naharitra ora maromaro izany, vokany jiolahy telo, izay voalaza fa mpanao “kidnapping” no maty voatifitry ny zandary, telo hafa kosa tafatsoaka. Efa ela no nahazo vaovao ny zandarimariam-pirenena avy ao amin’ny…
Redaction Midi Madagasikara 21 novembre 2013 Anosy, didim-pitsarana, Kidnapping, lozam-pifamoivoizana, Route digue, Sakafo lany daty, Toliara
# – « Route digue »- Nisy lozam-pifamoivoizana iray hafa indray. Nidona tamin’ny “poteau” ny fiara marika Peugeot 405 iray ary naratra ny mpamily. Nisy fiara avy any amin’ny ilany ary jambenan’ny jiro nampiasain’io izy ka izay no nahatonga ny loza, raha araka ny fanazavana azo. # – “Kidnapping” any ambanivohitra. Tsy vitan’ny manafika sy mangalatr’omby fotsiny…
Toamasina – Kidnapping : Tsy mbola misy ny fangatahana « rançon »
Redaction Midi Madagasikara 20 novembre 2013 Kidnapping, Toamasina
Omaly hatramin’ny 4 ora hariva, tsy mbola nandrenesana vaovao ny momba ilay fakana an-keriny teratany Karàna iray tany Toamasina niseho ny alatsinainy hariva tamin’ny 5 ora. Ny hany fantatra aloha hatramin’izao dia tsy mbola naharay fangatahana onitra na « rançon » ny fianakavian’ilay karàna. Araka izany dia manjavozavo ny fandehan-javatra. Tamin’ny fotoana nitondran’ireo jiolahy an’ity olona ity…